Malware dị na macOS dị adị ma daa na 2020 a dị ka Malwarebytes | Esi m mac
O doro anya na malware dị maka kọmputa niile, ma yana Windows ma ọ bụ macOS sistemụ arụmọrụ. Nke a abụghị ihe ọhụụ nye anyị mana ọ bụ eziokwu na na macOS anyị enweela "ntakịrị nchekwa" mgbe niile n'ihi mkpebi ndị Apple mere, n'agbanyeghị macOS malware dị adị na mgbe niile.
Na nke a, dị ka a ọmụmụ rụrụ site ike Malwarebytes, ọnụọgụ nke achọpụtara na 2020 bụ 38% dị ala karịa na 2019. Maka ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Windows, ọnụ ọgụgụ ahụ dịkwa mma mana ọ dịtụ ntakịrị, na nke a enwere mbelata 12% na malware na mkpokọta, na-agụta ndị ọrụ na ụlọ ọrụ.
Malware na-emetụtakarị peeji nke onye ọrụ na-anabata ihe niile na-enweghị ihe ọ bụla na akaụntụ, yana ole na ole mana ole na ole pirated ngwa ọdịnala nke ebudatara na Mac na ezi uche dị na ụfọdụ paireti utịla arụnyere na kọmputa ma na-efe ya. Malware kachasị na Macs metụtara amamọkwa ụgha ma ọ bụ mgbasa ozi na - enweghị ike iwepụ na kọmputa ahụ, ọ ga - adịkarị njọ malware na - emetụta data nkeonwe gị ọ bụ eziokwu na 1,5% niile achọpụtara malware nwere ike ịbụ ezigbo ihe egwu maka onye ọrụ.
Ebe ma ọ bụ mba ebe achọpụtara ọtụtụ malware na Macs, n'ezie, bụ United States. N'ebe ahụ, ọnụ ọgụgụ nke akụrụngwa Apple karịrị nkezi nke ndị ọzọ na ụwa ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na a na-achọpụta ọtụtụ ihe n'ebe ahụ. United Kingdom, Canada na France na-esote ya na ọkwa nchọpụta a. N'akụkụ aka nke ọzọ Achọpụtala ihe egwu 747 na mba anyị. Bụrụ na ọ nwere ike, data ndị a na-egosipụta mbelata dị elu na ha ma gosipụta n'ụzọ doro anya na malware dị, mana na ọ dị obere na kọmputa Apple n'oge 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Malware dị na macOS dị adị ma daa na 2020 a dị ka Malwarebytes
IOS 2, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, na watchOS 14.5 beta ndị dị maka ndị mmepe